Hunhu husingagamuchirwe: France inorangarira nhume dzayo kuUS nekuAustralia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Hunhu husingagamuchirwe: France inorangarira nhume dzayo kuUS nekuAustralia
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kurega chirongwa chengarava yepasi pegungwa icho Canberra neParis vakabvumirana muna 2016 chinoumba hunhu husingagamuchirike pakati pevabatsiri nevatinobatsirana navo, mhedzisiro yacho inokanganisa pfungwa chaiyo yatinayo yemibatanidzwa yedu, kudyidzana kwedu uye kukosha kweIndo-Pacific yeEurope. , 'Gurukota rekuFrance rekune dzimwe nyika rakazivisa.
Hurumende yeFrance inodhonza nhume dzayo kubva kuUnited States neAustralia.
France inodaidzira kubviswa kwayo kubva mubatanidzwa mutsva weAUKUS uye kurasikirwa kwechibvumirano chikuru chegungwa repasi pemvura kubaya kumusana.
Mutungamiri weFrance akakanzura chiitiko chegala pamuzinda weFrance muWashington, DC yakarongerwa gore remakumi maviri nemana rehondo yenhoroondo.
Gurukota rinoona nezvekunze kuFrance, Jean-Yves Le Drian vazivisa nhasi kuti France yarangarira vamiriri vayo kubva kuUnited States neAustralia pamusoro pe'hunhu husingagamuchirike 'hweWashington, London neCanberra mukugadzira chibvumirano chepasi pegungwa chenyukireya chakakonzera kudzimiswa kwechiFrench chikuru chakajairika. chikepe chepasi pegungwa neAustralia.
Sekureva kwaLe Drian, danho rekurangarira nhume rakanyatsoruramiswa ne 'simba rakakura' rekuzivisa kwaGunyana 15 kwakaitwa neAustralia, iyo USA uye UK.
"Pakukumbira kweMutungamiriri weRepublic, ndakafunga kukurumidza kuyeuka kuParis kuti ndibvunze vamiriri vedu vaviri muUnited States neAustralia," akadaro Le Drian.
Mutungamiri weUS, Joe Biden, Mutungamiriri weAustralia, Scott Morrison nemumwe wake weBritish Boris Johnson vakazivisa danho re'AUKUS 'muchiitiko chevanhu vatatu nemusi weChitatu masikati. Nzvimbo yepakati peiyi mubatanidzwa mutsva we "maritime democracies" chirongwa chemwedzi gumi nemasere chekupa Canberra ngarava dzinoshandisa simba renyukireya asi zvakajairika. Izvi zvaizoita kuti Australia ive nyika yechinomwe chete pasi rose yekushandisa ngarava dzakadai - uye iyo yega isina arisheni yenyukireya pachayo.
Hurumende ye Furanzi zvinonzi vakaziva nezvechibvumirano kubva kumishumo yenhau zhinji, kwete kubva kuWashington kana kuCanberra zvakananga, kunyangwe vakuru veAustralia vachisimbirira kuti vakanyatsojekesa kune mumwe wavo kuti chibvumirano cheFrance neAustralia chingamiswe.
Gurukota remauto eLe Drian naFlorence Parly vakapa chirevo chakatsamwa vachipindura kuvhurwa kweAUKUS, uye gurukota rezvekunze rakazodaidza 'kubaya kumusana.'
Mutungamiri weFrance Emmanuel Macron akakanzura chiitiko chegala pamuzinda weFrance muWashington, wakarongerwa gore remakumi maviri nemana rehondo yehondo yemugungwa yakabatsira kukunda Hondo yeUS yekuzvitonga.
France haina kungobviswa chete mumubatanidzwa uyu, asi yakarasikirwa nechibvumirano chekupa ngarava dzepasi pemvura kuAustralia. Hurumende yeFrance ine danda rakawanda muNaval Group, raishanda pachibvumirano, chakakosha kusvika pamabhiriyoni mazana matanhatu emadhora.